RRA, markaan Indhocade ha ka horeeyso dhulka Digil..
Dagaalka Somaaliya goortii uu bilaabmay ayaa sarkaal la yiraahdo Balaak hadana ka ah xildhibaan barlamaanka wuxuu soo geliyey magaaladaas ciidamadii Ina Cumar Jees ee uu la socday Maxamed Nuur Caliyoow oo jaalka la wada ahaa Caydiid. Intii ka dambeeyseyna Baydhabo rafaad iyo dhib midna kama bixin iyadoo mar walba loo soo maraayey dhuuni raacyo iyaga u dhashay .
Tusaale ahaan , Caydiid oo boqolaalkii kun oo qofood ee uu gaajada ku laayey ay ku diiwaan gashan yihiin meel walaba ayaa markii ay UNka ka baxeen Somaaliya oo ay Bay & Bakool ay ka soo reeysanayaan waxyeelooyinkii uu kooxdii xaraan ku naaxa aheyd ee Caydiid u geysatay ayaa si lama filaan wuxuu mar kale u qabsaday goboladaas iyadoo garwadeen uu ka ahaa Dr. Xaseey.
Gradaradaas lala bartayna waxay dhalisay in dadka degaanka ay sameeystaaan RRA iyagoo bartilmaameedkoodu uu yahay xoreynta dhulka Digil iyo Mirifle ee ka soo bilaabma Afgooye.
Somaalidu waa tan ay tiraahdo ,"Nin gardaran ma guuleystee",waa tii SNA oo markaas ka sii xoog badneyd kooxda Indhocade ay dhacday in dabada laga galo, lagana saaro Bay iyo Bakool , iyagoo ku sii socdana in dulmiga ay ka dulqaadaan Digil uu shirkii Carte uu hakadka geliyey.
C/qaasimna waxaa uu isticmaalay si uu u burburiyo RRA shaqsiyaad aan ka qayb gelin aasaaskeedii hore oo daneystayaal ahaa sida Saransoor, Balaak iyo Xaabsade si aan reerkiisa ka soo duulay Galgaduud ay u sii heystaan degaanada ayan laheyn, taasoo Xaabsade iyo inta la soo kireystay oo la midka ah ay wali sii wadaan.
Hadaan nahay reer Baydhabao , waxaan ku maahmaahnaa, "Anoo boor in jeedi yaa saadoo dubsheey ii dhawti", taas oo macnaheedu yahay , "Anigoo in aan baroorta raba ayaa sac seenta iigu dhufatay". Marka RRA oo wali u dhiman tahay in ay dulliga lagu hayo Digil ay ka qaadaan , ayna caawiyaan Somaalida kale ee dulman oo soo dadajin karta in Somaaaliya dawlad noqoto haddiiba la soo doontay , waxaa hubaal ah in taas ay keeni doonto laba kacleynteedii . Taasna , waxaa ku tuseeysa wadajirka Shaatiguduud, Sheekh Aadan iyo Deeroow oo markoodi horeyba ahaa hogaanka ururkaan.
Somaalidu waxy ku maahmaahdaa, " Ninkii soo joog lag waayo soo jiifaa laga helaa", sidaas ayaan ku soo socota haduu Eebe idmo inta dulmi-doonka ahe hantiida iyo degaanka eey iska laheyn xoogga ku heysaty sanooyin badnaa ee tegay iyagoo cid bixineeysa aysan jiri doonin .Sidaas in ay imaan doontana waxaa daliil looga qaadan karaa dagaalla Mudug iyo tabr darnaanta beeshii Gen. Caydiid ee hormoodka ka aheyd masiibooyinkii dhacay oo maanta iska dhicinla' saleebaan.
Nabsiga xataa haduu soo daaho waa la arkaa ee yaa u sheegga burcadka....
Minnesota oo noqotay meesha afka Soomaaliga loogu qadarin badan yahay
Erataria Oo ka Hadashay Shirka Soomaaalida Uga Socda Kenya